राष्ट्रपतिको निर्वाचन सन्निकट छ, यो राष्ट्रपति निवासको रातो घरमा को बस्ला ? कसको तालुमा आलु फल्ने हो, आकांक्षी नेताहरु दौडधुप गरिरहेछन् ।
् वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दोहोर्‍याउने इच्छा गरेर प्रचण्ड परिवारलाई डिनर र प्रचण्ड तथा केपी ओलीलाई लन्च ख्वाएर समर्थन लिने पटक पटक प्रयास गरिरहेकी छिन् । राष्ट्रपतिको निर्णायक उमाले र माओवादी नै भएकाले यी दुबै पार्टीभित्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेर आरामको सुखदायी जीवन बिताउने लालास गर्नेहरु धेरै निस्किएका छन् । यहाँसम्म कि एमालेभित्र पूर्वसभामुख सुभाष नेम्वाङ, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादीभित्र अमिक शेरचनसम्मको नाम सार्वजनिक भएको छ । यसकारण राष्ट्रपतिको पद चर्चामा छ ।
चार घेरोका सुरक्षामा हिड्न पाइने, बुलेट प्रुफ गाडी र सरकारी घरमा बसउठ गर्न पाइने, विश्वकै मानमनितो रहने हुनाले पनि राष्ट्रपति आकर्षक पद हुनपुगेको हो । यही पदका कारणले नेपालको राजनीतिक उथलपुथलसमेत भएको हो ।
प्रचण्ड यति चलाख थिए कि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्नोस्, गणतन्त्र कार्यान्वयन गराउनोस् भनेर लोभ्याए । त्यही कम्युनिष्ठ जालोमा परेका कोइरालाले चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौलामार्फत संविधानसभामा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पठाएर पास गराइदिए । कांग्रेस सभामुख कुलबहालुर गुरुङ मार्फत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गराए । राजतन्त्र अन्त्य भयो २०६५ साल जेठ १५ गते ।
तर तिनै प्रचण्डले आफै राष्ट्रपति बन्ने घोषणा गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला तीन चित परे, त्यही पीडाले केही समयको अन्तरालमा उनको मृत्यु भयो । पहिलो राष्ट्रपति कांग्रेसका डा.रामवरण यादवलाई बनाइयो । त्यसपछिको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बनिन्, माओवादी एमाले भागबण्डाका कारणले ।
अव तेश्रो राष्ट्रपति को बन्छ ? यही चर्चाले राजनीति गर्माएको छ ।
राष्ट्रपति पद आलंककारिक हो । कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । तर, राष्ट्रपति पदको चार्म यति बढेको छ कि थाकेका बुढा नेताहरु राष्ट्रपति बन्न लालायित बनेका छन् । मुलुकका लागि केही गर्न, केही सोच लिएर राष्ट्रपति अथवा संवैधानिक पदमा पुग्न कुनै नेता अथवा व्यक्ति अग्रसर हुने गरेका छैनन्, सबै पद पाएमा मजा आउँथ्यो, कमाइन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो, ठूलो हुन्थेँ भन्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । योभन्दा राजनीतिको असफलता अरु के हुनसक्छ ? राजनीति व्यापार बन्यो, व्यापार भनेपछि मुनाफाको कुरा आउँछ, त्याग कसले गर्ने ?